Microbiology (အဏုဇီဝဗေဒ) အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း – Live the Dream
Microbiology (အဏုဇီဝဗေဒ) အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
၉ တန်း ၁၀တန်း တုန်းက Biology မှာ သင်ရဖူးတဲ့ Bacteria တွေ ပိုးမွှားကောင်လေးတွေ ကို Microscope နဲ့ ကြည့်ခဲ့ဘူးလား? မင်မင်တို့ကျောင်းမှာတော့ Microscope မရှိခဲ့တော့ ဘာတွေများတွေ့ရမလဲဆိုတာ ကျောင်းသားသဘာဝအရမ်းသိချင်ခဲ့၊ ရင်ခုန်ခဲ့တယ်။ အဲ့သည်တုန်းကတော့ ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိခဲ့တော့ ဒီလိုဘာသာရပ်ကို ဘာကြောင့် သင်ပေးခဲ့လည်းဆိုတာကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ဒီနေ့တော့ Live The Dream စာဖတ်သူတွေကို မင်မင်လိုခေတ်မနောက်ကျရအောင် ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှား၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှား တွေအကြောင်း၊ fungi (မှို) တွေရဲ့ အကြောင်းကို သင်ကြားပေးတဲ့ Microbiologyအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Microbiology လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ဇီဝသက်ရှိတွေက အပင်နဲ့ မြေဆီလွှာကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုလဲ? လူတွေအပေါ်ဘယ်လောက်အကျိုးပေးလဲဆိုတာကို နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Microbiology အကြောင်းလေးကို ဖတ်ကြည့်စို့နော်…
၁. Microbiology ဆိုတာ ဘာလဲ
Micro ဆိုတာ သေးငယ်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး biology ကတော့ ဇီဝဗေဒ လို့ ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ လူတိုင်း သိပြီးသား ပါ။ Microbiology လို့ ခေါ်ဆိုတဲ့ အဏုဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်ဟာ လူတွေရဲ့ သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်ဘဲ microscope( အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း) နဲ့ မှသာ မြင်နိုင်တဲ့ သက်ရှိလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေ ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှား၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှား တွေ အကြောင်း fungi (မှို) တွေရဲ့ အကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် လေ့လာတဲ့ ဘာသာရပ်ပါပဲ။ အဲဒီ သက်ရှိပိုးမွှားလေးတွေရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာ ဆိုင်ရာအဆင့် ဆင့် ပြောင်းလဲပုံ တွေ ဂေဟစနစ်မှာ ၎င်းသက်ရှိတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တွေ စတဲ့အကြောင်းအရာ တွေကို သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Microbiology ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၎င်းသက်ရှိလေးတွေရဲ့ အကြောင်းကို ရှုထောင့်အမျိုးမျိုး ကနေ လေ့လာ ပြီးလူသားတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မည်မျှအကျိုးပြုနေကြောင်းကို ပိုမိုနားလည်သွား နိုင်စေဖို့ အတွက် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Microbiology ဘာသာရပ်မှာ Bacteriology, Plant Microbiology, Microbial Ecology, Soil Microbiology, Microbial Evolution စတဲ့ ဘာသာရပ်ခွဲတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Environmental Microbiology, Agricultural Microbiology, Pharmaceutical Microbiology စတဲ့ အထူးပြုနယ်ပယ်အသီးသီး နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်ခွဲတွေကိုလည်း သင်ယူရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Microbiology ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
မမြင်ရတဲ့ ဇီဝသက်ရှိတွေကိုလေ့လာရတဲ့ Microbiology က ဘယ်လောက်များအရေးပါနိုင်လဲလို့ ပေါ့သေးသေးမတွက်လိုက်ပါနဲ့။ ဇီဝသက်ရှိတွေက သဘာဝစွန့်ပစ်အညစ်အကြေး နဲ့ ရုပ်ကြွင်းများကို recycle လုပ်ခြင်းများ၊ အပင်များရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ဖို့အတွက် အစာအဟာရထုတ်လုပ်ပေးခြင်းများကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇီဝသက်ရှိတွေကို လေ့လာခြင်းက စိုက်ပျိုးပင်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကို ဖြည့်စွမ်းနိုင်ဖို့ နဲ့အသီးထွက်နှုန်းတွေကို တိုးတက်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ အသေအချာပါပဲ။ လူတွေရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ တစ်ချို့သောအစားအစာတွေမှာ ဘက်တီးရီးယား မွေးမြူပြီး ထုတ်လုပ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပေါင်မုန့်၊ ဘီယာ၊ ဒိန်ချဉ်၊ ချောကလက် စတဲ့ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း ဇီဝသက်ရှိ ဘက်တီးရီးယားကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇီဝသက်ရှိတွေက လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့ အစာအာဟာရနဲ့ ဗီတာမင်တွေကို ထိန်းညှိပေးခြင်းနဲ့ လူတွေအတွက် အန္တရာယ်ပေးမယ့် ရောဂါပိုးတွေကို ခုခံပေးခြင်း၊ တိုက်ဖျက်ပေးခြင်း၊ ပျံ့နှံ့မသွားအောင်ကာကွယ်ပေးခြင်း တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ လူတွေအတွက် ဇီဝသက်ရှိတွေက အရေးပါပြန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် ဇီဝသက်ရှိတွေကို အသေးစိတ်မလေ့လာထားရင် လူတွေကိုထိရောက်စွာကုသနိုင်မယ့်ဆေးတွေပေါ်လာလိမ့်မှာမဟုတ်သလို တစ်ချို့သော ကာကွယ်ဆေး၊ ကုသဆေးတွေမှာတော့ ဇီဝသက်ရှိ ဘက်တီးရီးယားတွေက အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် ဇီဝသက်ရှိဖြစ်တဲ့ မှိုကနေတစ်ဆင့် ပင်နီဆလင်ဆေးဝါးတွေ့ရှိမှုက သက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဇီဝသက်ရှိတွေဖြစ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားများနဲ့ မှိုများက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြေဆီလွှာနဲ့အပင်တွေအတွက် အရေးပါဆုံးဖြစ်သလို ၊ သက်ရှိတွေရဲ့အစားအသောက်နဲ့ အစာခြေစနစ်တွေ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်းတွေနဲ့ ပါဆက်စပ်နေတဲ့အရာဖြစ်လို့ ဇီဝသက်ရှိတွေကို လေ့လာရတဲ့ Microbiology ရဲ့အရေးကြီးပုံကို နားလည်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
၃။ Microbiology နဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးမွှား လို့ ဆိုရင် လူတွေကို အကျိုးမပေးဘဲ ရောဂါတွေကို သယ်ဆောင်သော ပိုးမွှားတွေအဖြစ် မကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ မြင်ကြတာ များပါတယ်။ Microscopes တွေ မှန်ဘီလူးတွေ ပေါ်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပညာရှင်တွေက ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေကို စမ်းသပ်လေ့လာရင်း အဲဒီပိုးမွှားတွေဟာ လူသား နဲ့ အခြား သက်ရှိ သတ္တဝါ တွေရဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်မှု အတွက် အထူးလိုအပ်ကြောင်း တွေ့ ရှိလာရပါတယ်။ အဏုဇီ၀ ပညာရပ်ကို အသုံးချပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း တွေဖြစ်တဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှု သန့်စင်ရေး၊ ဇီဝလောင်စာ ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလည်း ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသက်ကယ်ဆေး ဖော်ရေး၊ ရောဂါကာကွယ် ကုသစောင့်ရှောက်ရေး ဆိုင်ရာ ဆေးဝါးဖော်စပ်ရေးစတဲ့ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်း အဏုဇီ၀ ဗေဒ ရဲ့ နည်းပညာတွေ ဟာ ထည့်သွင်းအသုံးချရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဏုဇီဝဗေဒ ကို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အသုံးချမှု ကို နောက်ထပ်မြင်တွေ့ ရနိုင်တာကတော့ အစားအသောက် လုပ်ငန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက် တွေကို အချဉ်ဖောက်ရာမှာပဲ ဖြစ်စေ တစေး ပြုလုပ်ရာမှာ ဖြစ်စေ ပေါင်မုန့် နဲ့ ဒိန်ချဉ် ဒိန်ခဲ စတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း တွေ ပြုလုပ်ရာမှာဖြစ်စေ အဏုဇီ၀ ဗေဒ ဆိုင်ရာ ဓာတ်ပြုမှုတွေကိုလည်း မြင်တွေ့ ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Microbiology ဘာသာရပ်ရဲ့ အရေးပါပုံကို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
ဇီဝသက်ရှိတွေရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးပြုပုံတွေကို နားလည်မယ်ဆိုရင် အနာဂတ်မှာ ဇီဝသက်ရှိတွေကို လေ့လာခြင်းက ပိုမိုတွင်ကျယ်ပြီးအရေးပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နိုင်တဲ့အရာြဖစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ အသီးအနှံအထွက်တိုးစေဖို့၊ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အသီးအနှံဖြစ်စေဖို့၊ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ဝင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပေးနိုင်မယ့် Microbiology က အနာဂတ်မှာ အသုံးဝင်တယ်၊ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ငြင်းဆန်လို့မရနိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင် ရောဂါဘယတွေက ပေါများဆန်းပြားလာသလို ကာကွယ်ကုသပေးဖို့ ဆေးဝါးအသစ်အသစ်တွေအတွက် ဇီဝသက်ရှိတွေက ကူညီနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွမ်းကျင် Microbiologist များကို အနာဂတ်မှာ လိုအပ်နေဦးမှာပါ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအနေနဲ့လည်း ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ ဇီဝစိုက်ပျိုးရေးဆေးထုတ်လုပ်ခြင်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်တဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းများမှာ Microbiologist, Biotechnologist များအဖြစ် ကောင်းမွန်တဲ့ဝင်ငွေလစာများကို ရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝသက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်က လူသားအကျိုးပြုဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်နိုင်သလို အနာဂတ်မှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်တာကြောင့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ Microbiology ကို သင်ယူလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်